Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukungena kwefowuni kuyabuya kwiinqwelomoya zaseLufthansa
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngexesha lokungena ngefowuni, iikhowudi ze-QR zezatifikethi zamaphepha ngoku zinokufundwa kwaye ke zihlolwe ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
I-Lufthansa ibuyisela ukungena ngaphakathi kweenqwelomoya kwiinqwelomoya ezivela kwiindawo ezingezizo eziyingozi.
Abahambi kwakhona banokuphumelela kwabo ukukhwela ngqo kwi-smartphone yabo.
Ngokudlula kwibhodi yedijithali, akukho xwebhu longezelelweyo luyimfuneko kwikhawuntara yokungena.
ILufthansa iphinda inike abakhweli bayo inkqubo yokungena. Kuzo zonke iinqwelomoya ze2000 zeveki ezivela kwiindawo ezingekho semngciphekweni kwindawo yaseSchengen (okwangoku isuka eSpain, e-Itali okanye eSweden, umzekelo) ukuya eJamani, abahambi banokuphinda bakhuphe ipasiti yabo yokukhwela ngqo kwi-smartphone yabo xa bengena.
Oku kwenziwa kukuqinisekiswa okuzenzekelayo kunye nedijithali kwezatifikethi zokugonya ze-EU, ezingqina ukhuseleko olupheleleyo lokugonya, kunye neziphumo zovavanyo ze-COVID-19 ezivela kwilabhoratri yeCentogene.
Ngexesha lokungena ngefowuni, iikhowudi ze-QR zezatifikethi zamaphepha ngoku zinokufundwa kwaye ke zihlolwe ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Oku kuthetha ukuba indawo yokupasa yedijithali inokukhutshwa kwaye uxwebhu olongezelelweyo lokutshekishwa kwikhawuntari yokungena kwisikhululo seenqwelomoya akusafuneki.
Kodwa kuyafana nakwezinye ezininzi Lufthansa Iinqwelomoya: Nabani na ochaphazelekayo ukuba akanazo izatifikethi ezifanelekileyo zohambo unokuzikhangelwa ngu IZiko leNkonzo laseLufthansa ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba. Oku kunokuba bubungqina bovavanyo, isifo se-COVID-19 esisindileyo kunye nogonyo. Ukuqinisekiswa kwezicelo zokungena kwidijithali kunokujongwa ngale ndlela. Enkosi kwizisombululo ezitsha zedijithali, itsheki ngoku iyinxalenye yokuzenzekelayo kwaye ngenxa yoko ikhawuleza kakhulu, nakwiZiko leNkonzo.
I-airline icebisa iindwendwe zayo ukuba ukongeza kubungqina bedijithali, izatifikethi zentsusa eziprintiweyo kusafuneka zihanjiswe kuhambo kude kufike esinye isaziso.